K: Merry Christmas is Merry Christmas
ခရစ်စမတ် .. အခါသမယ ကို ရောက် လာ ပြန်ပြီ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ.. အနီရောင်.. အစိမ်းရောင်.. ရွှေရောင်..ငွေရောင်တွေ.. တလွင်လွင် လွင့် နေ ပြန်သည်။
ရပ်ဝေး ..ရပ်နီး.. ခရီး စဉ် များက.. မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီ ဖြစ်သော.. အိမ် များ ဆီ သို့...။
ဈေးကြီး တွေ တိုင်း မှာ..လူတွေ ကြိတ်ကြိတ် တိုး နေ သည်။
ဆိုင်တိုင်း ရဲ့ ရှေ့ မှာ ..စန်တာကလော့ ဦးထုပ် ဆောင်းထားတဲ့.. ဈေးကြိုတွေ နဲ့.. အရောင်း မြှင့်တင် နေ ကြ သည်။
စန်တာကလော့ ၀တ်စုံ လို့.. ပြဌါန်းခံ လိုက်ရတဲ့..အဖြူရောင် အနားကွပ် နဲ့..အနီရောင်..အနွေးထည် ထူထူကြီး ကို ၀တ်ဆင် ထား ရ တဲ့.. လူကြီး ခမျာ.တော့... ဒီဇင်ဘာ နွေပူပူ မှာ..ချွေးတွေ တပြိုက်ပြိုက် ကျ နေရှာ ရော့ မည်။ ဒါပေမဲ့..သူ့မှာ.. မနားနိုင်ရှာ..။ တခါရိုက်.. တဆယ် နဲ့.. ဓါတ်ပုံ ရိုက်မည့်..ကလေး တွေ.. အတန်းလိုက် ကြီး..သူတို့ အမေ တွေ ရဲ့ လက်ကို ဆွဲရင်း..စိတ်လှုပ်ရှား စွာ..တန်းစီ စောင့်ဆိုိုင်း နေ ကြ သည်။
လက်ဆောင် တွေ.. ဘယ်သူ့ ကို ပေးရ မလည်း လို့.. ဖိနပ် ဦးတည်ရာ.. ဈေး လျှောက် ပတ် နေရင်း.. အဆမတန် ညီးငွေ့ လာသလို ပင်။
. ဟ၀ှါ တို့ကို ..တခုခု ၀ယ်ပေး အုံးမှပဲ..
တော်ပါပြီလေ.. ပို့ ရ ပြုရ နဲ့.. ။
ဟိုတယောက် ကတော့..ငါ့ ကို..မနှစ်က..တကူးတက တောင်..ကဒ် ပို့ ရှာတာ.....
အင်း..နက်ဖန် ပဲ..ခရစ်စမက် ဖြစ်နေပြီ.. မှီ မှာလည်း မဟုတ် တော့ ပါဘူးလေ.. နေပါစေ တော့..။
နက်ဖန် .. ဘုရားကျောင်းသွားရင် တော့ ..သင်းအုပ် ဆရာ လင်မယား အတွက် ...တခုခု ပေး မှ..။ ဟောဒီမှာ..ယောင်္ကျားကိုင် လက်ကိုင်ပုဝါ တွေ.. ဗူးလေး နဲ့ ထုပ်ထားတာ.. အသင့် ပေး ယုံပဲ...။ တရားဟော ဆရာ တွေ တော်တော်များ စကားပြော ရင်း..တရား ဟောရင်း.. ခဏခဏ မျက်နှာ ကို ချွေး သုတ် တာ မြင်ဘူး သည်။ ချောကလက် ဗူး လည်း ကောင်းတာပဲ..။ နေပစေ တော့ ဟာ.. ဦးဏှောက်စား လည်း သက်သာ.. ၀န်လည်း ပေါ့ တဲ့.. Gift card တခု ပဲ ပေးလိုက် တော့ မည်။
အဲဒီ ဈေးကြီး ထဲက..ထွက်လာခဲ့ တဲ့ တိုင် အောင်..သူ့လက် ထဲ..ဘာပစ္စည်း မှ.. ပါမလာ ခဲ့..။ သူ့ရင်ထဲ မှာလည်း ..ခရစ်စမတ် မုဒ် ဆိုတာ ကြီး.. ပါ မ လာ ခဲ့ .။ တကယ်တော့..သူ့ရင်ထဲ မှာ.. ဘာ မုဒ် မှ..ကောင်းကောင်း မခိုအောင်း နိုင် တာ.. ကြာ ပြီ..။ အတုအယောင် မုဒ် တချို့နဲ့ သာ.. အခိုက် အတန့် နေပျော် အောင် နေ .. နေ ဖြစ် သည်။ အသက်က.. စကား ပြော လေ သလား..။ လူ ကတော့.. စကား နည်း နေ သည်။
တီဗွီ က လာတဲ့.. အဆိုတော် တွေ ရဲ့.. Carol သီချင်း တွေ.. နားထောင် ရ တာလည်း.. ဂျင်ဂဘဲလ် နဲ့.. စန်တာ ထဲ မှာ ပဲ လည်နေ သည်။ မြို့ ထဲကို ဆင်းလာတဲ့..စန်တာ ကလော့ တဲ့...။ ကလေး တွေ က.. ပျော်ကြ သည်။ သူတို့ လေး တွေ.. စိတ်ထဲ မှာ..တကယ့်.. တန်ခိုးရှင် ကြီး လို့ ထင်အောင်.. လူကြီး တွေက.. အမျိုးမျိုး တင်ဆက် ဖြေဖျော် ကြ သည်။ ညကျရင် လည်း..အိမ်မှာ.. ကလေး တွေ အိပ်တုန်း...လက်ဆောင်တွေ.. အသာလေး..ခြေအိတ် ထဲ ထဲ့ ဖို့..စီစဉ် ကြ အုံး မည်။
ညနေ သတင်း လာ နေပြီ..။ တီဗွီ ရမုဒ် ကို ကိုင်ပြီး.. လိုင်း ပြောင်း လုိုက်သည်။ ခရစ် စမတ် မှာ..ဘာသတင်း မှ သိပ် မထူး လှ သလို...။ ဒါပေမဲ့.. သူ့ အတွက် တော့.. အခုန.. သီချင်း အစီ အစဉ် တွေ.. ထက် ပို စိတ်ဝင် စား စရာ ပိုကောင်း သည် ဟု ထင် မိသည်။
အာဖဂန် စစ်မြေ ပြင် ရောက်.. သြစတြေလျ စစ်သား တွေက.. တီဗွီ ဖန်သားပြင် က တဆင့်..သူ တုိ့ မိသားစု ချစ်ခင်သူ အသီး အသီး ကို.. စကား လက် ဆောင် တွေ ပေး နေ သည်။ ဒီလို ပါပဲ လေ..။ စစ် ဆို တာ တွေ ကတော့.. ချစ်ခင်သူ တွေ နဲ့ အတူ နေလို့ မှ မရ တာ..။ ရန်သူ တွေ နဲ့ သာ အတူ နေ ရ တာလေ..။
အီရတ် က.. လူနည်းစု ခရစ်ယာန် တွေ က တော့..ဒီ နှစ် မှာ..ခရစ်စမတ် ပွဲ တော် မကျင်းပ ဖြစ်တော့ ဘူး တဲ့..။ မနှစ်က.. ဘုရားကျောင်း ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် မူ အတွက်ရော.. အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက် မူ များ ကြောင့် ရော.. အန္တရယ် ရှိ တဲ့ အတွက်.. သင်းအုပ် ဂိုဏ်းချုပ် များက.. ဆုံးဖြတ် လိုိုက် ခြင်း ဖြစ် သည် တဲ့..။ ရင်နာ စရာ ပါလား..။ ဒီဖက် ကမ္ဘာခြမ်းက.. တဆင့်ခံ ခရစ်ယာန် တွေ ကတော့.. မီး ရောင် တွေ တထိန်ထိန်.. သီချင်းသံ တွေ စီညံ စွာ နဲ့.. ခရစ် စမတ် ကြီးကို ခံစား လို့..။ သူတို့ လို.. ၁ ရာစု..အဦးဆုံး.. အစောဆုံး..ခရစ်ယာန် စစ်စစ်ကြီး တွေ အတွက် တော့.. ခရစ်စမတ် ဆိုတာ.. ကိုယ့်ဘုရားကျောင်း လေး ထဲမှာ ပဲ.. ခပ်တိုးတိုး ကျင်ပ ကျ ရ တဲ့.. နေ့ မြတ် တခု တဲ့ လား..။
ကြည့်စမ်း.. နောက် သတင်း တပုဒ် က ...ရှာရှာ ဖွေဖွေ..။ ခရစ် စမတ် ဈေးကွက် ရဲ့.. အဓိက..ဇတ်ဆောင် ကြီး.. စန်တာ ကလော့ ရဲ့ .. မူလ ဇစ်မြစ် .. သူတော်စင် စိန့် နီကိုလပ်စ် .. မွေးဖွား ရာ..တူရကီ နိုင်ငံ က.. မြို့လေး အကြောင်း..။ စိတ်ဝင်စား စရာ...။ (ဘာရယ်.. ) အဲဒီ မြို့ မှာ တော့.. ခရစ်စမတ် ပွဲ မကျင်းပ ဘူး တဲ့..။ ထူးဆန်း လိုက်တာ..။ တမြို့ လုံး တိတ် ဆိတ် လို့...။ ရှေးဟောင်း ဘုရား ကျောင်း လေး တခု ရှေ့ က.... ကျောက်ရုပ် ကြီးကို.. အသေအချာ ရိုက်ပြ နေ သည်။ ကလေး တယောက်ကို လက်ဆွဲ ပြီး..ကျောပိုး အိတ်ကြီး ထဲ မှာ.. ပစ္စည်း ပစ္စ ယ တွေ နဲ့.. စိန့် နီကုိုလပ်စ် ဆိုတဲ့..လူကြီး ကို ကြည့်ရတာ.. ညနေက..မြင်ခဲ့တဲ့.. ချွေးစေး တွေ ပြန်နေ တဲ့..ဘိုးဘိုး စန်တာ ကလော့ ကြီး နဲ့ လည်း မတူ ပါလား နော်။
ဟော.. အစ္စရေး နိုင်ငံ ..ဘစ်သလင်ဟမ် မြို့ က..ဘုရားကျောင်း တခု မှာ.... အောသိုဒေါ့စ် ခရစ်ယာန်တွေ နဲ့.. အာမေးနီးယန်း တွေ..နေရာလု ရင်း.. ရန်ဖြစ် ကြ လို့.. ပါလက် စတိုင်း ရဲ က.. ၀င် ဖြန်ဖြေ ရ တယ် ဆိုပါလား....။ မျက်မှောင်ကျုံ့ ရင်း.. အော် ရီ ပြစ် လိုက် မိ တော့ သည်။ ခရစ်တော် ရဲ့ မွေးနေ့ မှာ.. ခရစ်တော် မွေးဖွား ရာ မြို့လေး ရဲ့ သတင်း က.. တကယ့် ရီစရာ သတင်း..။
တီဗွီ ပိတ်တော့.. အင်တာနက် ပေါ့ ကွာ.. ။ ဘာရ မလည်း..ဒီခေတ် ထဲ..
ဘလော့ တွေ မှာ လည်း.. ခရစ်စမတ် တွေ တန်းစီ နေ သည်။.. ကိုယ်လည်း ၀င် တန်းစီ လိုက် အုံး မည်။
ဘာမှ အထွေ အထူး ရေး စရာ မရှိ လည်း.. လုပ်နေ ကြ အတိုင်း.. အဟောင်းလေး တပုဒ် လောက် ပြန်တင် လိုက် အုံး မည်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. Merry Christmas is Merry Christmas. :)
ပို့စ် အဟောင်းလေးလည်း ကောင်းပါတယ်။
ဘိုးဘိုးစန်တာကလော့ ဆိုလို့ ဆွဲမိအကို သာဂိက မေးလာတယ်။ မေမေ သိကြားမင်းနဲ့စန်တာကလော့က ကောင်းကင်ကနေ ဆင်းလာကြတာတူပြီး စီးလာတာချင်းဘာလို့မတူတာလဲတဲ့။ အင်း ... ဖြစ်နိုင်တာတော့ စန်တာကလော့မှာ သမင်ဆွဲတဲ့ ဆွတ်ဖားလှည်းကိုယ်ပိုင်ရှိပြီး သိကြားမင်းမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ အဆင်သင့်တာ စီးစီး ပြီး ဆင်းရတာ ထင်ပါရဲ့လို့ ဖြေလိုက်တယ်။
ရေးထားပုံလေးက တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။
Myanmar Smart Cookies said...
အင်း...ခရစ်စမတ်နဲ့က ကိုယ်နဲ့က ဘာမှမဆိုင်လှတော့..
let me greeting to you asaformal words " MERRY X`MAS".
I am late reader of your Blog. But nowsaday,i would like to read every day what will you publish on blog .
Be Happy without worries in your life.
Let me greeting to you asaformal words "MERRY X`MAS".
Anyway this x`mas post also clourful and thoughtful for reader.
Always support yor blog.,
Thanks Mi Tay 4, Craton.
and Phyo, Aye,I guess you are the new friends. Always welcome and really appreciate your X'mas greeting.
Myanmar Cookies.. I don't like cookie.. but I like Myanmar cookies. :) thanks for your greeting.
Ko Gyi Kauk and Ko Gyi Kyaw,
You are always welcome from this blog. You make my day Ko Gyi Kyaw. Thanks for your kind and cheering comments.
ဆောရီးပါ... နောက်တော့ ကျနေပြီ...
Merry X'mas လို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
ကေ့ စာအဟောင်းလေး ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်...
ကေရေ....ဟိုတနေ့ကပဲ ကေ့လိုအတွေးမျိုးလေးတွေးမိသေးတယ်...ဘယ်လိုမှmoodမလာတော့ပါလားဆို...သားဖို့ လက်ဆောင်လေးတွေဝယ်...ရုံးကလူတွေဖို့လက်ဆောင်တွေဝယ်ရတာလဲ တာဝန်တခုလို...သိပ်တက်တက်ကြွကြွမရှိ...အမျိုးသားနဲ့ ခံစားချက်ချင်းတူလားညှိကြည့်သေးရဲ့ ...သူကတော့ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ရေဒီယိုကလာတဲ့ သီချင်းတောင် ငြီးလို့ ...သြော် သူကငါ့ထက် အသက်ငယ်သေးလို့moodရှိသေးတယ်လို့ကေပြောသလို ထင်မိသေးတယ်...ငယ်က အမေ့ကို ပွဲကြည့်ဖို့ခေါ်ရင် ညည်းတို့ ပဲသွားကြ...လူရှူပ်ရှူပ် မလိုက်ချင်ဘူးဆိုတာ သတိရတယ်...ဒါပေမယ့် တူးပို့ ပို့ ဆိုတာတော့ ရင်ခုန်လက်ကျန်ရှိသေးတယ်...ဒါဆို ငါအသက်သိပ်မကြီးသေးပါပေါ့... ကောင်းသောနှစ်သစ်ပါညီမရေ...